Dowlada Tunisiya aad ayey uga xuntahay" go'aanka Faransiiska ee ah in la yareeyo fiisooyinka dalka fransa lagu galo —
Home » Dowlada Tunisiya aad ayey uga xuntahay” go’aanka Faransiiska ee ah in la yareeyo fiisooyinka dalka fransa lagu galo
Dowlada Tunisiya aad ayey uga xuntahay” go’aanka Faransiiska ee ah in la yareeyo fiisooyinka dalka fransa lagu galo
By Garraad Maxamad October 5, 2021 No Comments2 Mins Read
Madaxweyne Saied ayaa ku jawaabay “arrinta socdaalka aan caadiga ahayn waxaa kaliya
Madaxweynaha Tunisia Kais Saied ayaa Sabtidii qadka taleefanka kula hadlay madaxwaynaha Faransiiska Emmanuel Macron intii uu ku guda jiray wadda hadalka wuxuu muujiyey sida uu uga xun yahay dhimista ay Paris fiisooyinkii la siin jiray dadka Tunisia dhintay, sida lagu sheegay bayaan rasmi ah.
“Madaxweynuhu wuxuu ka xun yahay go’aankii lagu yareeyay tirada dal-ku-galka ee la siiyay dadka reer Tunisia ee doonaya inay u safraan Faransiiska,” ayay madaxtooyada Tunisia ku sheegtay boggeeda Facebook.
Sida laga soo xigtay madaxtooyada Tunis, intii lagu gudajiray wada sheekaysiga labada madaxweye, Mr. Macron “wuxuu sheegay in tallaabadan dib loo eegi karo.”
Madaxweyne Saied ayaa ku jawaabay “arrinta socdaalka aan caadiga ahayn waxaa kaliya oo wax looga qaban karaa aragtida cusub”, taasina waxay noqon doontaa mid ka mid ah “ahmiyadaha dowladda cusub” ee Tunisia, oo la filan karo maalin kasta hadda.
Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay arrimaha socdaalka intii lagu guda jiray wadahadalka taleefanka, waxayna “isku raaceen in la xoojiyo iskaashiga labada dhinac ee soo jireenka ahaa,” ayuu aqalka faransa looga taliyo ee Elysee ku yiri bayaan.
Paris ayaa ku dhawaaqday Talaadadii dhimista tirada fiisooyinka la siin doono muwaadiniinta Morocco, Aljeeriya iyo Tunisa, iyada oo tixraacaysa in la yareeyo muhaajiriinta dalalkan Maghreb ka imaanaya.
Sida laga soo xigtay bayaanka Elysee, Madaxweyne Macron “wuxuu xusay jadwalka hay’adeed ee ay filayaan shacabka Tuuniisiya iyo beesha caalamka,” wuxuuna “muujiyey sida ay uga go’an tahay in la sameeyo wada-hadalo ay ku lug yeeshaan qaybaha kala duwan ee dadka Tuuniisiya.
Madaxweynaha Tuuniisiya ayaa la wareegay awoodihii fulineed dhammaadkii bishii Luulyo isaga oo kala diray xukuumadda, isla markaana laalay baarlamaanka. Arbacadii, wuxuu Najla Bouden ka codsaday inay soo dhisto dowlad cusub.